बैंक – Page9– Halkaro
फेरी मर्यो अर्को गैँडा
बैंकिङ प्रक्रियाबाट होइन बाहिरबाटै भित्रए करोडौँको भारतीय ५०० र १००० का नोट
प्रकाशित मिति : २०७३, २९ कार्तिक सोमबार
काठमाडौँ । नेपालमा प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० का भारतीय नोटहरु बैंकिङ प्रक्रियाबाट नभएर कामदार र अन्य स्रोतबाट आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रबैंकले १०० दरका नोटमात्र ल्याउने गरेकाले अन्य नोटहरु कामदार र अन्य स्रोतबाट आएको राष्ट्र बैंकका बिनिमय व्यवस्थापन बिभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । नेपाल-भारत खुल्ला सीमा व्यापार र कामदार मार्फत […]
नेपाली जनतासँग कति छ भारू, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? राष्ट्र बैंक नै अन्यौलमा
प्रकाशित मिति : २०७३, २६ कार्तिक शुक्रबार
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको भारु व्यवस्थापनका लागि भारतसमक्ष अनुरोध गरेको भए पनि जनतासँग भएको रकम के गर्ने भन्ने विषय छलफलमै आउन सकेको छैन । ‘बैंकिङ प्रणालीमा रहेको भारु व्यवस्थापनका लागि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) […]
भारतमा पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिवन्द
प्रकाशित मिति : २०७३, २४ कार्तिक बुधबार November 9, 2016
नयाँ दिल्ली । भारतले पाँच सय र एक हजारको नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मध्यरात १२ बजेबाटै पाँच सय र १ हजार रुपैयाँका नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेका हुन् । भारतीय मिडियाहरूले जाली नोट कारोबारीलाई निरत्साहित गर्न भारतले आफ्नै मुलुकभित्र त्यस्ता नोट प्रयोगमा […]
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा राजस्व सचिव खनाल नियुक्त
प्रकाशित मिति : २०७३, १९ कार्तिक शुक्रबार November 4, 2016
काठमाडौँ, कार्तिक १९ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा राजन खनाल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका, राजस्व सचिव राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी बैठकले ख्वपः विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले […]
जनता बैंकले पचास प्रतिशत हदप्रद सेयर खुला गर्ने
काठमाडौँ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले मंसिर १ गतेबाट पचास प्रतिशत हदप्रद शेयर बिक्रि खुल्ला गर्ने भएको छ । २ बराबर १ अनुपातमा बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने जनाएको छ । बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ करोड ३ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । हकप्रद शेयरमा कात्तिक १० […]
सिद्धार्थ बैंकको हदप्रद सेयर निष्काशन
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले २५ प्रतिशत अर्थात ४ः१ को अनुपातमा आज हकप्रद सेयर निष्काशन खुला गरेको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ७५ लाख ५५ हजार एक सय ९३ कित्ता हकप्रद सेयर आज ९विहिबार० देखि निष्काशन खुल्ला गरेको हो । उक्त सेयरका लागि गत असोज १६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् […]
प्रोफेशनल दियालो लक्ष्मी बैंकसँग एक्वीजीसनमा जाने
काठमाडौँ । क्षेत्रीयस्तरको वित्तीय कारोबार गदै आएको प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकले एक्विजिसनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । दश जिल्लामा वित्तीय कारोबार गदै आएको बैंकले लक्ष्मी बैंकसँग एक्विजिसनमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको १० औ वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रा. राजेन्द्र प्रसाद सुवेदीको सभापतित्वमा सम्पन्न सभाले प्रोफेसनल दियालो विकास […]
अरूण काबेलीको ३० लाख कित्ता शेयर निष्काशन
काठमाडौँ । ताप्लेजुङ र पाँचथरको चार गाविसमा २५ मेगावाटको बिद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको अरुण काबेली पावर लिमिटेडले मंगलबार देखि सर्वसाधारणको लागि ३० लाख कित्ता सेयर निश्कासन गरेको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । निष्काशन गरिएको ३० लाख […]
गोर्खाज फाइनान्सलाई धितोपत्र बोर्डको प्रश्न शेयर कारोबार किन नगरेको
प्रकाशित मिति : २०७३, ३ कार्तिक बुधबार
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गोर्खाज फाइनान्सलार्इ शेयर कारोवार नगरको भन्दै त्यस बारे जवाफ माग गरेको छ । गोरखा विकास बैंक र काठमाडौँ फाइनान्स गाभिएर बनेको गोर्खाज फाइनान्सलाई बोर्डले दुई संस्था गाभिएर एकीकृत कारोबार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सेयर अभिलेखीकरण नगरेको भन्दै किन नगरेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ […]
विपन्नको पढ्ने आकांक्षा पूरा गर्न आइएमई तथा ग्लोबल आईएमई बैंको छात्रवृत्ति
काठमाडौँ, कार्तिक ३ । आइएमई तथा ग्लोबल आईएमई बैंकले हिसान तथा प्याब्सनको सहकार्यमा ‘आईएमई-ग्लोबल आईएमई आकांक्षा छात्रवृत्ति’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत सार्वजनिक, नीजि तथा सामुदायीक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ११ कक्षासम्म अध्ययनरत आर्थिक रुपमा विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र २०७३ का लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । आईएमई […]